Orinasa fandefasana entana iraisam-pirenena - Flydis
Avelao ireo matihanina momba ny lozisialy za-draharaha hitantana ny entanao.
Miaraka amin'ny Serivisy fandefasana FCL sy LCL fandefasana entana, azonao alefa mora foana any amin'ny trano fanatobiana entana FBA na aiza na aiza manerantany ny vokatrao
Serivisy Courier sy Air
Mampiasà mpampita hafatra UPS, Mpandefa hafatra DHL, Mpitondra entana ao amin'ny Fedex sy ny serivisy mpitatitra entana TNT ary ny entam-barotra handefasana ny vokatrao any amin'ny trano fanatobiana entana FBA manerantany.
Serivisy barcode sy serivisy
Ho an'ny vokatra azo ekena izay mitaky kaody bara Amazon, Fahafenoana nataon'i Amazon dia afaka mampihatra ireo kaody ireo ho anao amin'ny sarany isan-zavatra. Avelao izahay hitahiry vola!
FBA Photography Product
Manampy anao izahay hahazo ny sary ankatoavin'ny Amazon amin'ny fotsy fotsy
Amazon FBA dia iray amin'ireo orinasa telo lehibe ao Amazon koa.
Izahay dia manome antoka fa hahazo ny be indrindra sy hampitombo ny habaka anananao ianao hanomezana izay ilain'ny mpivarotra rehetra
Giants iraisam-pirenena: Ireo iraka iraisam-pirenena lehibe efatra: DHL, UPS, TNT, Fedex
Fanaraha-maso fanandramana vokatra tsara amin'ny entanao! Hotsapainay tsirairay ny vokatrao mba hahazoana antoka fa efa salama tsara izy ireo alohan'ny ahatongavana any Amazon
Ahoana no anampiantsika?
Izahay dia mandrindra ny loharanom-bolanao Amazon
ary ny fizotry ny fandefasana entana avy any Shina.
Raiso ny Inventoryo
Horaisinay maimaimpoana ny lisitry ny lisitr'ireo mpamatsy anao raha any Shenzhen na Dongguan no misy azy ireo, na alefa any aminay mivantana ireo mpamatsy anao raha any amin'ny faritra hafa izy ireo.
Fanomanana sy fanoratana
Manolotra izay rehetra ilainao izahay mba hanomanana ny vokatrao hamenoana ny fepetra takian'i Amazon. Anisan'ny serivisy ny fanoratana, kitapo poly, bundling, famonosana, na zavatra hafa mifototra amin'ny filàna.
Alefa any Amazon
Alefanay any amin'ny Amazon Warehouse amin'ny alàlan'ny DHL ny tahirinao, UPS, rivotra, lamasinina na an-dranomasina miankina amin'ny filanao. Raisinay avokoa ny fizotrany rehetra, anisan'izany ny fahazoan-dàlana, hetra.
Ekipa fitaterana matihanina
Serivisy fitaterana matihanina, serivisy fanaraha-maso kalitao serivisy fanodinana entana, sns.
Manampy ny mpanjifanay izahay amin'ny fikirakirana ny entana nalefa avy any Shina ho any amin'ny firenen-kafa
11 fandefasana an-taonany maro
Izahay dia orinasa fanamarinana volamena an'i Alibaba. Orinasa matanjaka iray ihany no manana an'io mari-pahaizana io. Manana isika 11 traikefa an-taonan'ny fandefasana, ary ny toerana fandefasana entana dia mety ho aiza na aiza, toy ny tranonao na trano fitehirizan-tranon'i Amazon.
Hifandray amin'ny mpamatsy anao izahay mba hitaterana soa aman-tsara ny vokatrao amin'ny trano fitehirizam-bokinay, ary avy eo ampiasao ny DAP na ny DDP na fomba hafa handefasana ny vokatra any amin'ny toerana voatondro arak'izay takian'ny mpanjifa.
Manome serivisy fanaraha-maso kalitao matihanina izahay, mpanjifa maro no mampiasa. Matetika ny orinasa dia tsy manamarina tsara ny vokatra rehetra, izay mety hiteraka tsy fanombanana kely aorian'ny fivarotana vokatra. Hizaha tsara ireo vokatra arakaraka ny takian'ny mpanjifa izahay hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Fihenam-bidy bebe kokoa ary
Ny zava-dehibe indrindra dia ny fihenantsika fihenam-bidy betsaka amin'ny mpanjifa, tompon'andraikitra amin'ny mpanjifanay ny fitaterana anay.
Sidina rivotra DDP-sidina mivantana Sina
Sidina rivotra DDP-sidina mivantana Hong Kong
Seranam-piaramanidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina
Fitaterana an-dranomasina DDP-Seranan-tsambo Shanghai
Kabinetra fitaterana an-dranomasina
Fandefasana DHL / UPS Express
Fitaterana FEDEX Express
Fitaterana TNT Express
Fitaterana EMS Express
Ny antony itiavan'ny mpanjifanay anay？
Inona no mampiavaka antsika amin'ny hafa eny an-tsena
Mandany fotoana be dia be ny fitantanana ny mpamatsy anao any Sina. Amin'ny alàlan'ny outsourcing ny prep sy ny fizotranao logistic aminay, mitahiry fotoana bebe kokoa ianao izay azo ampiasaina amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao, -barotra, ary ny varotra.
Fantatray fa manana filàna samihafa ianao raha ampitahaina amin'ny hafa - toy izany, manana rafitra mamela anao handoa ny serivisy ampiasainao fotsiny izahay. Aza mahita zavatra ilainao? Ampahafantaro fotsiny ny ekipanay dia handamina vahaolana ho anao izahay!.
Fantatray fa mety mila miaro ny vokatrao amin'ny fifaninanana ianao na olona mitady hangalatra azy. Manome toky izahay fa azo antoka aminay ny tsiambaratelonao rehefa mitazona ny vokatrao izahay amin'ny alalàn'ny fanomanana sy ny fandefasana entana.
Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa azo antoka izahay mba hahazoana antoka fa tonga ara-potoana sy milamina ny entanao